octobre 2017 · déliremadagascar
Nanao fanambarana io maraina io ny loholon’i Madagasikara Rakotomanana Honoré, ary nanambara fa niala tsy ho Filohan’ny Antenimierandoholona ny tenany. Hitsahatra amin’ny maha filohan’ny Antenimierandoholona ahy aho, ary averiko aminareo ny andraikitra ary banga ny toerana, hoy izy. Continuer la lecture →
Socio-eco	 31 octobre 2017 R Nirina
MINISTERAN’NY FAHASALAMAM-BAHOAKA: Miantoka ny fahasalamana ny sakafo azo antoka
“Ho dorana avokoa ireo karazan-tsakafo miditra eto Madagasikara tsy manaraka ny fenitry ny fahasalamana”. Nambaran’ny Tale misahana ny fitsirihana ny antoka ara- pahasalamana sy ny kalitaon’ny sakafo (ACSSQDA), Joely Nirina RAKOTOVAO RAVAHATRA fa ho giazana ireo entana rehetra varotana eny an-tsena ka tsy nandalo fitsirihana ara-pahasalamana mba hisorohana ny fahapoizinana ara-tsakafo. Continuer la lecture →
Socio-eco	 30 octobre 2017 lynda
TOETRY NY ANDRO: Handrahona mety arahina erika ny ilany atsinanan’ny afovoan-tany.
Handrafitra ny toetry ny andro mandritra ny herinandro ny Alizay malefaka na antonony tsy marin-toerana. Ho mafy ny fitsokan’ny rivotra saika manerana ny Nosy. Continuer la lecture →
Sport	 29 octobre 2017 R Nirina
GRAND OPEN MAHEREZA : Mitaiza tanora ny kaominina.
Vita androany 29 Oktobra 2017 ny famaranana baolina kitra GRAND OPEN MAHEREZA teny amin’ny kaominina Mahereza. « Ao anatin’ny fitaizana ny tanora ny hetsika mba tsy hirona amin’ny fifohana zava-madomelina sy herisetra isan-karazany izy ireo». Continuer la lecture →
Doka	 29 octobre 2017 .
Union européenne à Madagascar
L’atelier de restitution des travaux du comité interministériel chargé de la révision de l’encadrement juridique du processus électoral malgache, s’est tenu, hier, à l’hôtel Carlton.
Ravalomanana Marc : Vonona amin’ny fampihavanam-pirenena
Tokony hisy fifanarahana mihitsy ataon’ireo kandida sy mpanao politika hiatrehana ny fifidianana amin’ny taona ho avy , hoy Ravalomanana Marc raha tsy izany, hoy izy, dia tsy hisy fifidianana eken’ny vahoaka eto Madagasikara. Tsy ho mora ny fiatrehana io fifidianana io raha tsy misy izay ary tokony hazava amin’ny rehetra ihany koa ny fitsipi-dalao. Ny hisian’ny fifidianana tena eken’ny vahoaka, dia ny fifanakalozan-kevitra. Continuer la lecture →
Socio-eco	 29 octobre 2017 R Nirina
Fivarotana ny tany « VILLA ELIZABETH » : Andian’olona sy fahefam-panjakana no mahavita izany
Efa ela (taona 2007 tany ho any) ny Pr zafy no niresaka tamin’ireo olona akaiky azy fa misy nitsiriritra io Villa Elizabeth io. Zarain’ity raiamandreny ity amin’ny « olona atokisany » ny ahiahiny : » Misy olona niditra tao amin’ny Villa, hoy izy, ka namaritra tany ary mitonona ho mpiasan’ny fananantany ireo olona ireo, tsy fantatro akory sady tsy nampandrenesina aho tompontrano fa ohatran’ny an-tery no nanaovana izany, hoy ny fitantarany. Continuer la lecture →
Socio-eco	 26 octobre 2017 R Nirina
VATOSOA : Manamora ny dingana atao amin’ny fanondranana ny ministera.
Olon-tsotra sy orinasa 18 nandray anjara tamin’ny fifaninana momba ny fanefena vatosoa. Hisolo tena an’i Madagasikara mandritra ny fampirantiana iraisam-pirenena atao any Londres ny volana novambra ho avy izao ny nandrombaka ny loka voalohany. Niofana momba fanefena vatosoa izy ireo talohan’ny fifaninana.
Naranty nandritra ny lanonana fizarana ny loka ireo vatosoa voapaika, asan-tanan’ireo mpandray anjara. Nanatrika izany ny Ministry ny harena an-kibony tany sy solitany, ZAFILAHY Ying Vah, ny Tale Jeneralin’ny ivom-pampiofanana momba ny vatosoa eto Madagasikara (IGM), Andrianirina RASOLONJATOVO.
Ao anatin’ny politikan’ny ministera misahana ny harena an-kibon’ny tany ny fanamorana ny dingana atao amin’ny fanondranana vatosoa. “Ho fampitomboana ny vola miditra amin’ny kitapom-bolam-panjakana no tanjona eto”, hoy i Andrianirina RASOLONJATOVO. Ny fidirana amin’ny sehatra ara-dalana no lalana ahafahana manatanteraka izany.
Mbola tsy hiditra eny amin’ny fivoriana ara-potoana ny fitsipika mifehy ny harena an-kibon’ny tany. Na izany aza, mifandinika amin’ny fanatsarana ity sehatry ity foana ny ratsa-mangaika rehetra voakasika, araka ny fanazavan’ny Ministra.
Ny 25 oktobra 2017 ny fizarana mari-pankasitrahana an’ireo mpifaninana tamin’ny andiany faharoa.
Socio-eco	 25 octobre 2017 R Nirina
MAHAJANGA : Hanatsara ny kalitaon’ny fandraharahana ny « réseau 4G ».
Manampy ny mpandraharaha hampiroboroboana ny sehatra iasany ny fampiasana ny vokatry ny teknolojia. Anisan’izany ny aterneto haingam-pandeha izay manatsara ny kalitaon’ny tolotra ho an’ny tsena anatiny. Continuer la lecture →
Socio-eco	 23 octobre 2017 .
« Asa tana-maro » : Les femmes d’abord !
« Dans l’attribution du « Asa tana-maro », la priorité a été accordée aux femmes », a fait savoir le ministère de la Population (MPPSPF).